Ny Huawei P10 dia mandalo ny fanamarinana FCC | Androidsis
Huawei P10 dia mahazo fanamarinana FCC
Manuel Ramirez | | Huawei, MWC, About us
Mahazo fanamarinana avy amin'i Kaomisionan'ny serasera federaly any Etazonia (FCC) no santatry ny fahatongavan'ny fitaovana finday toy ireo fitaovana Android izay nampiditra antsika an-taonany maro.
Izy io dia ny Huawei P10 izay nandalo tao amin'ny FCC ity Alarobia ity. Huawei dia nameno ny takelaka ho an'ny fitaovana iray mitondra modely isa VTR-L29, izay efa fantatra ho P10 vaovao.
Ny zava-misy mandalo amin'ny FCC dia manamafy ihany koa fa ho fitaovana ilay fitaovana navoaka tsy ho ela any Etazonia. Fantsona iray izay ho iray amin'ireo lalan-kivoahana hanokatra elanelana amin'ny tsena sarotra any Etazonia izay anjaran'ny mpandraharaha.
The Huawei P10, nanamafy ihany koa androany tamin'ny horonantsary ny fampisehoana nataony tao amin'ny MWC, miavaka amin'ny a 5,5 ″ efijery QHD AMOLED ary ny tatitra vao haingana dia manondro fa hiasa ity fitaovana ity noho ny puce Kirin 960 sy RAM 6 GB, ankoatr'ireo 256 GB ny memo anatiny ananany
Tsaho hafa milaza fa ny P10 dia miavaka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy hanaraka ny fironana nomen'ny Google Assistant amin'ny Google Pixel, toy ny izany dia ho hita ao amin'ny LG G6. Ny iray hafa amin'ny kalitaon'ny terminal dia ny fikirakirany roa rehefa mampiasa ny lantia Leica.
Ny Huawei p10 dia hiaraka amin'ny P10 Lite sy ny P10 Plus, toy ny nitranga tamin'ny taon-dasa raha ny mpanamboatra sinoa nanana ny P9, P9 Pro ary P9 Lite. Miaraka amin'izany, Huawei dia lasa iray amin'ireo kintana mamirapiratra amin'ny Kongresy Iraisam-pirenena Momba ny Finday izay hatao any Barcelona amin'ny faran'ny volana, manokana io dia hanokatra ny varavarany amin'ny 27 febroary, ka ny ampitso, ny 26 febroary, no lehibe indrindra filokana amin'ireo marika lehibe amin'ny finday. MWC izay miova endrika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei P10 dia mahazo fanamarinana FCC
Nhora Alicia Gálvez Garzón dia hoy izy:
Manana finday HUAWEI P10 Reference VTR-AL00 aho, izay novidiko tany Chine. Napetrako tao am-piasana eto Kolombia izy io, saingy nahazo hafatra avy amin'ny Cellular Operator aho, milaza fa tsy voamarina ny telefaona finday hiasa ao Kolombia ary ho tapaka mandritra ny 90 andro. Notadiaviko ny lisitry ny CRC sy ny HUAWEI P10 izay toa homolojika, izy ireo dia ny Referensi VTR-L09, VTR-L29, WAS-LX1A ary WAS-LX3. Ny fanamarinana eo amin'ny pejy CRC, dia manondro fa ny fanondroana ny homolojika dia tokony hanaraka ny fenitra FCC-ID.
Ahoana no tsy hahavery ny fividianana finday?
Valiny tamin'i Nhora Alicia Gálvez Garzón
ANDREA RODRIGUEZ dia hoy izy:
HELLO NHORA TOA IZAY NAHATONGA tamiko ary tsy hitako izay hatao? HITADY VAHAOLANA VAHAOLANAO?
Valio amin'i ANDREA RODRIGUEZ
Uber dia efa manana ny rindrambaiko mahaleo tena ho an'ny Android Wear 2.0
Ny taranaka faharoa Pokémon dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity